Nyanzvi yekumera kwembatatari yekudyara zvinhu - "Potato System" magazini
kuru Unyanzvi / Tekinoroji
Nyanzvi kumera kwembesa yekudyara mbatatisi
S.A. Banadysev, Chiremba wekurima zveSainzi, SSC Doka-Gene
Kukurumidza kubuda, kukura nekukurumidza uye yunifomu yekukudziridzwa kwezvirimwa zvakakosha zvinodiwa kuti goho rakakura rembatatisi. Pre-kumera kunobatsira kugadzira aya mamiriro, inosimudzira kuumbwa kwemamwe mabukira uye nhungirwa pane yega yega tuber, izvo zvinowedzera hupfumi hwekudyara zvinhu. Kukurumidza kukura kunokurudzirwa zvakare kudzivirira chirwere chinoputika uye kudzora sora. Nekuda kwekukura kwekutanga kuitira hutachiona nezvirwere, kubviswa kwekutanga kwemisoro kunogoneka. Mhedzisiro yekuwedzera kwezvibereko kubva mukumera inogona kusvika pa10-15%, ichimhanyisa kukohwa kwekutanga - kusvika kumavhiki maviri, izvo zvinopa imwe mari yekuwedzera kana yatengeswa pamitengo yakakwira zvakanyanya. Izvo zvakanakira pre-kumera zvinonyatsoshandiswa kana icho chinhu chekudyara chikagadziriswa kune chaiwo mamiriro ekukura nezvinangwa. Kugadzirirwa kwembeu yemazamu yekudyara kunofanirwa kuitiswa uchifunga nezvehunhu hwayo, mamiriro ehupenyu, huwandu uye hunyanzvi hwekugadzirwa.
Mamiriro ezvinhu eiyo mbeu yezvinhu akakosha zvakanyanya, nekuti inogadzirisa masimba uye hunhu hwekukura kwembatatisi mumwaka wekukura. Zvirimwa kubva kumhodzi yembeu yemazera akasiyanasiyana epanyama anokura nenzira dzakasiyana Yakwegura tuber inobuda uye inokura nekukurumidza, uye inopa goho repamusoro rekutanga. Panguva imwecheteyo, kukwirira kwezvirimwa, nzvimbo yemashizha, hombe tubers ishoma, uye huwandu hwematemu nematombo hwakakura. Iyo yehupenyu zera rembeu tubers zvinoenderana nehunhu hunhu hweakasiyana, huwandu hwetembiricha uye kushushikana kunoiswa neiyo tuber panguva yekurima nekuchengetedza, izvo zvinokanganisa zvemukati biochemistry, kunyanya chiyero uye huwandu hwehomoni. Kushungurudzika mumunda kwakanyanya hunyoro, tembiricha, zvinovaka muviri, utachiona uye kukuvara kwema mechanical, panguva yekuchengetedza - tembiricha, hunyoro, aeration, mavanga nezvirwere. Physiological kuchembera kwematubhu kunoitika mukati memwaka wekukura, asi mapatani eiyi maitiro haanyatsonzwisiswa uye haigone kuenzaniswa. Panguva imwecheteyo, akawanda maficha anozivikanwa. Saka, tubers yemiti yakafa nguva isati yakwana, sekutonga, yakura pane physiologically. Tembiricha yevhu yakakwira munzvimbo dzakaoma paivhu rine jecha inogona kukurudzira kumera kwembeu kunyangwe kukohwa kusati kwatanga. Nekudaro, iyo yakanyanya kuchembera yembeu tubers inoitika panguva yekuchengetera nekuda kwekukwirira tembiricha uye hunyoro, kupwanya, kupenya kweganda, kupinduka kwakapinza mune microclimate parameter, uye kukura kwezvirwere. Nekuda kweizvozvo, panguva yekudyara, tubers inogona kuve mune imwe yenyika shanu: yakadzika dormancy, apical kutonga, kuwanda kumera, matavi, kukura kuita madiki tubers - ona mufananidzo.
Nzira iri nyore yekuongorora chimiro chemuviri chemasters kuyedzwa kumera. Kune izvi, sampuli yemazuva ese tubers inorema anopfuura 10 kg mwedzi miviri isati yadyarwa imere murima pamhepo tembiricha pamusoro 20 оC. Mushure memasvondo maviri kusvika matatu, mutsauko uripo pakati pemhando nemabheji zvinoonekwa muhuwandu uye nekuonekwa kwezvamera. Huwandu hwameso akatumbuka anotibvumidza kupedzisa nezve zera rezvemuviri wea tubers uye nekugadziriswa kwakakodzera mukugadzirira kudyara. Kutanga kunonoka kumera kunoreva kusarara, kusvetuka kwekushisa kunodiwa kumera. Kukurumidza kugadzirira kumera - dormancy yakatovhunika, pakutanga kwekumera, tembiricha yekumera yakadzika yakakwana. Kumera kweanopfuura makumi mashanu kubva muzana emeso hunhu hwemuviri wekare wekudyara zvinhu. Huwandu hwepamusoro hwemashanga hunofanirwa kutarisirwa kubva pauri, asi kumwezve kugadzirira uye kumera kunofanirwa kuitwa panodzikira tembiricha kudzivirira zvisingadiwe zvekukwegura. Kumera isingasviki 50% yemaziso chiratidzo chemuviri wemuviri tuber. Mashoma mashoma madzinde uye mahombe tubers anogona kutarisirwa, asi kugadzirira kwekudyara kunofanira kutanga kare.
MuGerman, mucherechedzo wakagadziridzwa wemuviri mamiriro ehupfu hwembatatisi - ona tafura.
Tafura. Kuongorora kweyepanyama mamiriro eembatatisi mbeu yezvinhu
Indicator Graduation Score
Soil Type Yakatonhora, yakanyorova 0
Kupisa, yakaoma 5
Mamiriro ekunze panguva yekudyarwa Yakatonhora, yakanyorova 0
Kupisa, kuoma (mazuva matatu kumusoro 3оC in the crest) 25
Zuva rekuchenesa Pakutanga 0
Kukura kwetuber Small 0
Kuchengetedza kupisa Pazasi pe4оС 0
Pakati pechina ne4 оС 10
Pamusoro pechinomweоС 25
Yakakura Bhegi Yekuchengetedza Kusvikira pamazuva gumi 0
Mazuva gumi kusvika makumi maviri 5
Anopfuura mazuva makumi maviri 10
Kumera kwemaziso kwete 0
Rizctoniosis kwete 0
Turgor tuber high 0
Nguva yekuzorora yezvakasiyana. Yakareba 5
Kana batch ye mbatatisi ikawana kusvika pamakumi mashanu poindi - iyo yekudyara tubers iri diki, makumi mashanu-50 mapoinzi - iyo yekudyara tubers ine avhareji zera Iyo yakawanda iyo nhamba yakawanikwa inodarika zana, zvakanyanya kusashamisa mamiriro emuviri.
Izvo zvinhu zvikuru zvinopesvedzera kumera kwe mbatata:
- tembiricha yekuchengetera 3-5 ° C inokurudzira kumera kwakawanda (kudyara, chengetedzo uye isati yamera mbatatisi yemabhizimusi.);
- tembiricha yekuchengetera 7-8 ° C inosimudzira kuumbwa kwemashoma mashoma (apical kutonga, mbatatisi yekutanga);
- tembiricha 8-12 ° C kusvika mavhiki maviri usati wadyara panguva yekumera kwekudyara, chikafu uye kugadzirwa kwemaindasitiri matapiri;
-Thermal kuvhundutsa kusvika 15-20 ° C mazuva matatu kusvika mana isati yadyarwa kuti ikurudzire kumera kwemabhatani akakura. Asi usanyanya kupisa nekukurumidza, kana zvisina kudaro ma tubers anogona kukwana kubva kune inoshanda metabolism;
- humidity inoganhurira bacterioses, inowedzera tembiricha mhedzisiro, hunyoro hune hukama kubva 85 kusvika 90% hwakanyanya.
- mwenje unodzivisa kukura kwehurefu hurefu, inowedzera kumera uye inoita kuti mwenje uteme huve hwakavimbika, nhungirwa pfupi inopa mwenje wakawanda;
- nguva yekutanga kumera inosiyana zvichienderana nemhando dzakasiyana;
- makuru machubhu anokura nekukurumidza kupfuura madiki;
- yakarebesa pre-kumera nguva - yakanyanya kutangira kuumbwa kwetuber, kushanda kwakaderera.
- ipfupi nguva yekutanga kwekumera - kunonoka kuumbwa kwe tubers, kukwana kusakwana.
Kumera kunoenderana nechinangwa chekugadzira mbatatisi (ona dhayaini):
Mbatatisi yekutanga. Panguva yekudyara pane tuber, zvinodikanwa kuti uve nemashizha mashoma chete, kuitira kuti hombe tubers dzikurumidza kuumba mushure mekudyara. Kune izvi, tembiricha yekuchengetedza kwenguva yakareba inofanirwa kubva pa6 kusvika 8 ° C uye kumera kwenguva yakareba (mazuva 35-70, zvichienderana nezvakasiyana-siyana) pakudziya kwe10-12 ° C.
Tafura mbatatisi uye mbatatisi yekugadzirwa kwemaindasitiri. Pakazosvika nguva yekudyara, nhamba yakakura yemapundu inoda kuumbwa. Chengetedza tembiricha kubva pa3 kusvika ku5 ° C uye nguva yekumera yakadzika (mazuva 30-60) pa10 ° C. Zvimwe: kupisa kupisa pa 12-15 ° C.
Mbatatisi yembeu. Panguva yekudyara, huwandu hwakanyanya kwazvo hwemasvosve (mabukira) zviri nani. Chengetedza tembiricha kubva pa3 kusvika ku5 ° C uye nekumera kupfupi (mazuva makumi maviri kusvika makumi mana) pa20 ° C.
Tekinoroji yekubereka. Iyo inonyanya kushandiswa kumera mumabhokisi uye muhomwe. Kureba uye huwandu hwekamuri hune pesvedzero inosimbisa pane kufanana kweiyo microclimate uye kugona kudzora kwemhepo. Mamita mashoma emahara emahara nzvimbo inofanirwa kuve pamusoro peakarongedzwa emabhokisi, anenge ¼ ekukwirira kwekamuri. Dzimba diki dzinopisa nekukasira uye dzinofanira kunge dziine mhepo yakadzika yakawanda kudzivirira kupatsanura tembiricha. Uchishandisa firimu rakapepetwa, nzvimbo dzega dzega dzinogona kugoverwa nekukasira kuitira kuti dzikwanise kupindura kune chaiwo hunhu hwemhando. Kudiwa kwenzvimbo dzekumera ndeye 10 m2 pa 1 ha, zvakateerana, 1000 m2 pa zana ha. Iko kushayikwa kwenzvimbo iyo kazhinji inowanzoganhura huwandu hwekumera.
Kuti uvandudze kuratidzwa kwechiedza kwemapatata ari kumera, zvinokurudzirwa kushandisa mabhokisi matsva akajeka. Izvo zvakagadzirwa nepurasitiki yakajeka, ine makona matete, uye maburi mazhinji. Kuti mwenje yakawanda ipfuure mubhokisi, iwe unofanirwa kuchengetedza chinhambwe chakanyanya sezvinobvira pakati pemabhokisi maviri akamira rimwe pamusoro peimwe - angangoita 12-15 cm Kukwirira kwemabhokisi kunofanirwa kunge kwakaenzana nehurefu hwerambi remwenje (1,2 kana 1,5 m ). Negadziriro iyi yemabhokisi akakosha, iwe unogona kuwana yakasimba mwenje kutumbuka inosvika kune masendimita 2. Mumabhegi, iyo yakachengeteka nhungirwa kureba inosvika pamamirimita mashanu. Yakareba inotsemuka painodurura mabhegi.
Kujekesa mwenje ndechimwe chezvinhu zvakakosha mukumera. Zvakanaka kuvhenekera maawa gumi nemashanu pazuva. Iko kushandiswa kwechiedza chechisikigo kunogoneka kana uchimera muzvivakwa. Mwenje yemagetsi emagetsi pa15 ° C inoburitsa 5% kushoma kuvhenekera nekuti inoitirwa nzvimbo dzemahofisi. Yenyanzvi yekumera kwembatatisi, mwenje yakasarudzika-inoshandisa simba Potatolight marambi akagadzirwa, akagadzirirwa mashandiro pane tembiricha yakaderera, ichideredza kushandiswa kwesimba ka60. Mufananidzo uri kurudyi kweNEU unoratidza mwenje wakakodzera panguva yekumera.
Kupisa kwakakosha paramende mukumera kwekumera. Kuti uwane urefu hunodiwa neyakagadzwa zuva rekudyara, misiyano yemhando yekushisa inofanira kucherechedzwa. Iyo yekumera mwero inogona kugadziriswa pamwe nekushisa. Izvo zvakakoshawo kuchengetedza yunifomu tembiricha mukati mezuva rese uye pakukwirira kwakasiyana kweakasiyana emabhokisi. Kudonha kwetembiricha kunogoneka mangwanani-ngwanani (pazasi pe3 ° C hazvidiwe kumera). Naizvozvo, iro kamuri rinofanirwa kuve rakagadzirwa nemhepo heater yeinokwana kugona kuitira kuti tembiricha irege kudonha pazasi pe7 о C.
Mhedzisiro yekupisa kubva ku2 kusvika ku10 ° C kubva pazasi kusvika padanho repamusoro remadhirobhu zvinogoneka mukushaikwa kwemweya wekudzokorora. Mune mhaka yakaipisisa, izvi zvinogona kutungamira kusvika kureba kwemasvomhu uye kusimuka kwavo padanho panguva yekudyara. Kuti abvise izvi, fan yedenga yeakakwanira mweya inokwana neyekushisa sensor inoshandiswa. Izvi zvinopa kuenzana kwekushisa kwemhepo pazvinenge zvichidikanwa.
Mhepo yakanyorova yekunyorovesa kwembeu kubva 85 kusvika 90%. Kazhinji pazasi 80% - tubers vanogona kurasikirwa turgor. Kugara zvachose humidity pamusoro pe95% kune ngozi zvakanyanya, kunotsamwisa kuoneka kwekunyaradza pane tubers pane kupisa kwakanyanya uye kunotungamira kukudziridzwa kwefungal uye hutachiona chirwere, kunyanya sirivanga gaba uye fusarium. Kunyorova kukuru kunotungamira mukuumbwa kwemidzi pazasi pezvinomera, izvo zvinokonzera matambudziko panguva yekudyara. Yakadzika midzi midzi inoratidza yakanyanyisa humidity.
Kana matavi akaratidzika sepamberi uye akava akareba, anonyanya kubviswa. Maitiro aya anoshivirirwa nemhando dzakasiyana nekureba nguva yechando dormancy uye nenguva yakareba yekubvunda. Chero zvazvingaitika, kana uchibvisa mabukira, zvinotevera zvinofanirwa kucherechedzwa: nekutanga kumera uye simba apical, vhiki 2-3 usati wadyara, tembiricha isiri pasi pe 8-10 ° C, dzivirira kukuvara. Mushure meizvozvi, kumera kunogona kuenderera mberi nekushisa kwe15-18 ° C, mwenje wakadzika uye wakakwira humidity. Kana mamiriro ekunze akaipa anononoka kudyara, kumera kunogona kudzikiswa nekudzora tembiricha uye mwenje wakasimba.
Kukura Hutsanana. Zvese michina nemidziyo inosangana neyekudyara machubhu inofanira kucheneswa uye disinfivha nenzira inoshanda. Kudyara machubhu panguva ino kunetseka zvakanyanya kune fungal uye hutachiona hutachiona. Kuti udzivise kukuvara kwemuchina uye maronda, marubhi anofanira kuisirwa kumera panguva yekudziya kwe10 ° C. Kugadziriswa nekuzadza kwemabhokisi, mabhegi anofanira kuparadzaniswa kubva mudzimba dzekuchengetera. Yakakwidza guruva painozadza mabhokisi kunoparadzira hosha huru spores kune yekudyara zvinhu uye inomera.
Kuchena Kumera kunoitwa kunyanya kugadzirwa kwembatatisi dzekutanga. Chero ani anomera mbatatisi anoiswa mukati nekudyara nekukurumidza sezvazvinogona. Nguva yekudyara mune ino kesi inotsanangurwa nekugadzirira kwemuviri wevhu uye tembiricha inogamuchirwa. Izvo zvinodikanwa kuti ivhu riome, rinotapika uye rinopwanyika panguva yekutanga kudyara mbatatisi, uye tembiricha yevhu iri pamusoro pe5ºC. Kuti udzivise kutonhora, kudyara tubers kunofanirwa kunge kuri panopisa ivhu mazuva maviri kusvika matatu usati wadyara. Naizvozvo, zvinofanirwa kuomesa chinhu chakamera - kuvadzivirira kwemazuva akati wandei mumhepo panopisa masikati nehusiku tembiricha.
Pre-inomera uye akaomesesa kudyara zvinhu zvinoshivirira kune tembiricha tembiricha. Kutanga pa5ºC, izvi zvinyorwa zvinotanga kukura zvine simba muvhu. Kudyara tubers kunogona kumira kwenguva pfupi-kupisa tembiricha kudonha. Tembiricha yekudziya pazasi 2º C inokonzeresa mhodzi. Pakutonhora padyo ne 0º C, nhungirwa dzinofa, asi iyo tuber inoramba iine kugona kumera zvakare. Kuedza kwese nemhedzisiro yekumera kuchaita dambudziko kana uchinge wadzoka mushure mekudyara tembiricha ye subzero yakasimba pamwe chete neyekunyorovhu kwevhu kunyorova mumatura Nekudaro, kufanotaura kwenguva refu kwemamiriro ekunze kwakakosha kusarudza zuva rakakodzera rekudyara mbatata dzakatumbuka. Kana zvisina kudaro, kuwedzera kwekutarisirwa mukugadzirwa kwekutanga uye, zvichidaro, mitengo yekutengesa yakakwira haizove, uye mutengo wekupera unenge watovepo.
Mari yekudyara ndeye zviuru gumi nezvishanu zvemakumi mairi rubles / ha. Pa15 ha, mazana maviri kusvika mazana matatu emabhokisi epurasitiki emabhokisi kana mabhegi makumi maviri nemakumi maviri nemasere, mwenje mina kusvika kune masere makobvu ane tambo dzinomhanya uye dzinomesa, kubva pa20 kusvika ku1 m zvinodiwa.2 makamuri ane machena madziro, kudziya, mhepo inonamira uye humidity control. Izvo zvinodikanwa kuti uongorore mashandisiro esimba (300 kWh / ha), mari yekuwedzera yebasa. Panhanho yekudyara, kubereka kunoderera, zvine musoro kuti tishandise vanodyara ve clone nemanyorerwo emadziro ebatoers. Mbeu dzinozvitenderedza dzinobvuma mabukira chete kana danho rekudyara radzikira uye ma tubers adimburwa mudiki.
Seimwe nzira yekutangisa kumera, kudyara mbatatisi kunogona kusimudzirwa nekupisa kwemazuva 3-4 usati wadyara. Maitiro acho anotevera: pisa mbatatisi kwemazuva 3-4 kusvika 15-20 ° C, nguva nenguva ventilate kuitira kuti ma tubers arege kuzarirwa. Nebatch batch yemhepo inodziya kune huwandu hwechigadzirwa, nzvimbo dzekudzvinyirira dzinogona kuoneka pamuganho nechinhu chinotonhora, uye iine iko kuvandudzwa kwesilver scab uye fusarium. Kungoisa uye kubatidza hita hakubatsiri zvakanyanya. Izvo zvinodikanwa kuti ushandise kudziyisa pamwe chete neyakaenderera inoshanda mweya uye kudzikamisa kwakaringana kwemhepo kuenzana kugovera tembiricha mune iyo tubers uye iyo yakazara yekuchengetera vhoriyamu. Thermal shock (shock) chiyero chinofanirwa kuitwa nenzira yehunyanzvi kudzivirira njodzi yekusaenzana uye kupisa. Nekuda kwekudziya, nenguva yekudyara, zvinomera zvinofanirwa kunge zvichitoonekwa (izvi zvinonzi machena machena), asi zvachose hazvina kukuvara mukuita kwekudyara kwepamusoro. Iyo pfupi incubation nguva haigone kupa imwechete yekutanga tuber kuumbwa sepashure pekumera kwenguva refu. Asi nhungirwa dzinoonekwa nekukurumidza, tubers inomera nenhamba huru yemashizha. Kupisa kwekupisa kunofanirwa kutariswa senzira yepamusoro-soro uye yepamusoro nzira yekugadzirira kudyara mukugadzirwa kwembeu uye kugadzirwa kukuru kwematapiri.
Tags: goho rinowedzerakugadzirira kutakurambatatisi inomera
Canada: Mbatatisi yembeu 2019 ine yakaderera yehutachiona hweY utachiona mumakore achangopfuura
Dzidza mbatatisi mvura zvinodiwa kuti iwedzere kudiridza